Semalt: Mipetrapetraka amin'ny tranokely tsara tarehy
Ankehitriny dia misy fomba maro ahafahan'ny olona manangona angona avy amin'ny tranonkala isan-karazany. Tranonkala marobe, toy ny Google sy Facebook, no manome API ireo mpikaroka tranonkala afaka ampiasaina mba hahazoana ny fampahalalana rehetra ilainy. Saingy tsy ny tranonkala rehetra dia manana API avokoa, satria mety tsy tian'ny mpamaky azy hanangona karazana fampahalalam-baovao avy amin'izy ireo na satria tsy manana teknolojia avo lenta izy ireo. Saingy inona fanao amin'ny tranokala no atao amin'ireny karazana tranga ireny? Ahoana no ahafahan'izy ireo mamoaka ny angon-drakitra raha tsy mampiasa API ny pejy sasany? Ny marina dia afaka manangona vohikala amin'ny fomba maro izy ireo.
Ampiasao Google Docs amin'ny vokatra tsara kokoa
Amin'ny fampiasana Google Docs, dia afaka maka ny fampahalalana rehetra ilainy izy ireo. Afaka mampihatra azy io amin'ny saika amin'ny fiteny rehetra ny programming, toy ny Python. Python dia tenim-pamoretana mahery vaika, izay mora ampiasaina ary ahafahan'ireo mpandrindra ny tetikasa any amin'ny tontolo tena izy. Izany dia mamela ny mpampiasa azy haneho hevitra marobe amin'ny lin-drakitra vitsy kokoa noho ny tenim-pandrindrana hafa tahaka an'i Java.
Trondro tsara tarehy (Bibliotheca Python): fitaovana mahagaga ho an'ny asa haingana
Ny tranombakoka Python dia ahafahana mamadika fivoarana haingana amin'ny web tetikasa ary manolotra tranokala maro hanatanterahana asa. Ohatra, BeautifulSoup dia fitaovana mora amin'ny asa haingana, toy ny fanangonana antontan-kevitra samihafa, toy ny lisitra, fifandraisana, tabilao ary bebe kokoa. Raha ny marina, BeautifulSoup dia manome ny mpampiasa azy fomba tsotra sy mahomby hikaroka, hitady sy hanova ny angona sasany. Satria, ohatra, maka tahirin-kevitra HTML, ary mampiharihary izany, amin'ny famoronana rafitra mifanaraka aminy ho fahatsiarovana. Ankoatra izany, dia manova avy hatrany ny tahirin-kevitra rehetra ao amin'ny Unicode, noho izany dia tsy voatery hieritreritra momba ny fiafarana ny mpampiasa.
Karazana sipo mahafinaritra
Ny mpampiasa dia afaka mametraka io fitaovana mahomby io amin'ny Windows sy Linux. Avy eo, afaka mivezivezy izy ireo ary mianatra ny fampiasana ny rafitra tsotra. Afaka mahita ny ohatra ilaina izy ireo mba hahafantarana ny fomba hampiasany ity rafitra ity. Ireo ohatra ireo dia afaka manampy azy ireo hahatakatra tsara kokoa ny rafitra. Torolàlana azo ampiharina amin'ny fahazoana fahalalana bebe kokoa ny fomba ahafahana manangona angona avy amin'ny tranonkala samihafa.
Mitahiry ny angon-drakitra azo jerena tahaka ny tahirin-tsoratra voalohany. Fa raha ny tranga sasany dia misy diso ao anatin'io antontan-taratasy manokana io, ny Soupa tsara tarehy dia maneho azy ireo ary manome ny rafitra ampiasain'ireo mpampiasa azy. Soupa tsara tarehy dia manolotra karazana lehibe, izay manome anarana singa HTML, mba hampandeha azy ireo kokoa ho an'ny mpampiasa. Mila tadidin'ny mpampiasa tranokala, ohatra, fa ny singa iray dia afaka manana karazana kilasy maro ary ny sokajy dia azo zaraina amin'ny singa. Ny tsirairay amin'ireo singa ireo dia tsy manana afa iray afa-tsy iray ihany, izay azo ampiasaina amin'ny pejy iray indray mandeha. Soupa tsara tarehy dia fandaharana goavana iray, izay natao indrindra ho an'ny tetikasa toy ny tranonkala. Manome fomba tsotra ho an'ny mpampiasa azy izy io hanova ny mozika parse. Ity programa amin'ny fiteny ity dia novolavolaina ankoatra ireo parses tsara indrindra ao amin'ny Python, tahaka ny LXML ary tena azo henoina. Raha ny marina dia mahita angon-drakitra voatahiry izy ary manangona ireo fampahalalana ilaina rehetra ho an'ny fanodinana tranonkala ao anatin'ny minitra vitsivitsy Source .